အစားတစ်လိုင်းလေးတွေကို ဘာကြောင့်ချစ်သင့်တာလဲ – Trend.com.mm
စားမယ်ဝါးမယ်၊မစားရရင်ကိုက်မယ် (လက်မောင်းတွေဘာတွေပြောပါတယ်)၊မုန့်ဝယ်မကျွေးရင်စိတ်ကောက်မယ်၊ဝယ်ကျွေးရင်လည်းကောက်မယ် (ကောက်ချင်လို့ကောက်တာ၊ငြိုငြင်တာလား)… ဒီလို ကောင်မလေးတွေဟာအင်မတန်မှချစ်ဖို့ကောင်းတာပါ။ဒီလိုအစားတစ်လိုင်းကောင်မလေးတွေကိုရထားတဲ့ ကောင်လေးတွေက တကယ့််ကိုကံထူးရှင်တွေပါ။ အစားတစ်လိုင်းကောင်မလေးတွေကို ဘာကြောင့်ချစ်သင့်တာလဲဆိုတော့….
စားချင်တာစားနေရရင်ပျော်နေရောပဲ။ဘာမှလည်းသိပ်သိတာမဟုတ်။အခြားစုံတွဲတွေကြားမှာရှိတဲ့ အပြန်အလှန်ကျောတာတွေ၊ကစားတာတွေ၊လှည့်စားဖို့တွေ သူတို့မှာဘာမှအာရုံမရှိရှာပါဘူး။တစ်နေ့တစ်နေ့ဘာစားရရင်ကောင်းမလဲနဲ့ ဘယ်ဆိုင်ကောင်းလဲ..ဘယ်ဆိုင်တော့ 2+1 discount တွေချနေပြီဘာညာဆိုတာတွေ မလွတ်သွားအောင်လိုက်စုံစမ်းထောက်လှမ်းနေရတာနဲ့တင်အားလပ်ချိန်မရှိရှာသူလေးတွေပါ။
ဟုတ်တယ်လေ။သင့်ကောင်မလေးက အစားတစ်လိုင်းလေးဆိုရင် သင်နဲ့အစားနဲ့ဘယ်သူ့ကိုပိုချစ်လဲလို့မေးကြည့် “ဟာ… ကိုကိုကလဲ…တူမှမတူတာကွာ..”ဆိုပြီိးချွဲပါလိမ့်မယ်။တကယ်လို့ သင့်ကိုပိုချစ်တာပေါ့ဆိုရင်လည်းသူညာနေတာပါ။ ဒါပေမယ့်် သူတို့မုန့်စားမယ့်အချိန်တွေထဲကနေဖဲ့ပြီးသင်နဲ့နေပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့ရဲ့သင့်အပေါ်ချစ်တဲ့အချစ်ကစစ်မှန်တယ်ဆိုတာပြနေတာပါပဲ။
သင်ဖုန်းခေါ်တာမကိုင်လို့၊message တွေပြန်မပို့လို့ဆိုပြီး ဘယ်ကောင်နဲ့လျှောက်လည်နေပြီလဲလို့စိတ်ပူနေစရာမလိုမယ့်သူမျိုးတွေပါ။ သင်ဖုန်းခေါ်တာမကိုင်ခဲ့ရင် သူတို့တစ်ခုခုစားနေလို့ ၊အစားမှာစိတ်ရောက်နေလို့ပါပဲ။သူတို့စိတ်ထဲမှာ သင်ရယ်အစားအသောက်တွေရယ်ကလွဲပြီး ဘယ်သူ့အတွက်မှနေရာပေးမထားတဲ့အတွက် သင့်အနေနဲ့ ဘယ်တော့ဖောက်ပြန်မလဲရယ်ဆိုပြီး တွေးပူနေစရာမရှိပါဘူး။
သူတို့ကအစားအသောက်ကိုအသည်းစွဲလေ။ ဒီတော့ စိတ်ကောက်ရင်သူတို့ကြိုက်တာလေးတွေဝယ်ပြီးချော့လိုက်ရုံပဲပေါ့။ဝက်ကြေးအိုးနံ့မွှေးမွှေးလေးရရင်၊ဒါမှမဟုတ်ဆူရှီနံ့သင်းသင်းလေးရရင်အလိုလိုကို စိတ်ကောက်ပြေပြီးသားဖြစ်နေမယ့်ကောင်မလေးတွေပါ။ သင်လုပ်ထားတဲ့အပြစ်ကကြီးတယ်ဆိုရင်တော့ ဟော့ပေါ့ဘယ်နှစ်ခါစားခွင့်ကတ်တို့ဘာတို့လုို Gift card လေးတွေဝယ်ပေးဖို့လိုတာပေါ့လေ 😛
အစားကောင်းကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးတွေက သူတို့ကြိုက်တာတော်တော်များများကိုကိုယ့်ဘာသာလုပ်စားဖို့လည်းကြိုးစားလေ့ရှိကြပါတယ်။ဒီတော့ သူတို့ကိုယူလိုက်တဲ့ကောင်လေးတွေကသူတို့စားသလိုကောင်းကောင်းစားရပြီပေါ့။ ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေး… သူတို့က ဘယ်ဟာနဲ့ဘယ်ဟာနဲ့တွဲစားရင်စားလို့ကောင်းတယ်ဆိုတာမျိုးလည်းနှံ့နှံ့စပ်စပ်သိသေးတာမို့ သင်ရဲ့တစ်ဝမ်းတစ်ခါးစိုပြေစေဖို့တော့ စိတ်မပူလေနဲ့တော့။
အစားကောင်းအသောက်ကောင်းကြိုက်သူလေးတွေက သူတို့ကြိုက်တာတွေဟာများသောအားဖြင့် ဈေးကြီိးတာကြောင့် ကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်ဘယ်သူ့မျက်နှာမှကြည့်မနေပဲဝယ်စားလို့ရအောင် ပိုက်ဆံများများရှာနိုင်အောင်ကြိုးစားတတ်ကြသူလေးတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘဝမှာ ဘယ်သူ့မှအားကိုးမနေဘူး ယောက်ျားတွေဘာတွေလည်းမလိုဘူး၊ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ် ကိုယ်ကြိုက်တာအေးဆေးသာသာယာယာစားမယ်လို့ ကြွေးကြော်နေတတ်သူလေးတွေပေါ့။ဒါကြောင့် သူနဲ့ကြိုက်ရင်တော့ သူစားတာနဲ့ပဲမွဲမှာပဲလို့မတွေးပါနဲ့ ။တစ်ခါတစ်လေကိုယ့်ချစ်သူကြိုက်တာဝယ်ကျွေးရတာမျိုးတော့ရှိမှာပေါ့လေ။ များသောအားဖြင့်တော့သူတို့စားချင်တာစားရဖို့ သင့်ကိုအားကိုးတကြီးတောင်းဆုိုနေမယ့်သူတွေမဟုတ်ကြပါဘူး။ (online shops တွေ၊အစားအစာပို့စ်တွေတိုင်းရဲ့အောက်မှာ သူတို့ဘဲမှန်းသိအောင် ဘဲကိုမန်းရှင်းပြီး ဆပ်ပြာတုံးကိုတရော်သုတ်ထားတဲ့အရေးအသားနဲ့ “ကိုကိုးးးးးး ချစ်တုံးလေးကိုဝယ်ကျွေးနော်၊ဝယ်ပေးနော်”လို့ မန့်တတ်တဲ့ Pleb များမပါ)
ဒါတွေကတော့ အစားတစ်လိုင်းကောင်မလေးတွေကိုဘာကြောင့်ချစ်သင့်တာလဲဆိုတဲ့အချက်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ချစ်သူကအစားတစ်လိုင်းလေးဆိုရင်တော့ ဂုဏ်ယူလိုက်ပါတော့။ ရည်းစားမရှိတဲ့အစားတစ်လိုင်းလေးတွေဟာဆိုရင်တော့ ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမခံရသေးတဲ့ ကျောက်မျက်ရတနာလေးတွေပါ။ဒါကြောင့်ကိုယ့်လိုကျောက်မျက်ရတနာလေးတွေရှိရင် Mention ပြီး ဂုဏ်ဆာလိုက်ကြရအောင်…အဲ့လယ်။
အလွန်ချောသော အစားတစ်လိုင်း Admin မမ
စားမယဝြါးမယြ၊မစားရရငကြိုကမြယြ (လကမြောငြးတှဘောတှပှေောပါတယြ)၊မုနြ့ဝယမြကွှေးရငစြိတကြောကမြယြ၊ဝယကြွှေးရငလြညြးကောကမြယြ (ကောကခြငွလြို့ကောကတြာ၊ငှိုငှငတြာလား)… ဒီလို ကောငမြလေးတှဟောအငမြတနမြှခစွဖြို့ကောငြးတာပါ။ဒီလိုအစားတစလြိုငြးကောငမြလေးတှကေိုရထားတဲ့ ကောငလြေးတှကေ တကယြ့ကြိုကံထူးရှငတြှပေါ။ အစားတစလြိုငြးကောငမြလေးတှကေို ဘာကှောငြ့ခစွသြငြ့တာလဲဆိုတော့….
စားခငွတြာစားနရရေငပြွောနြရေောပဲ။ဘာမှလညြးသိပသြိတာမဟုတြ။အခှားစုံတှဲတှကှေားမှာရှိတဲ့ အပှနအြလှနကြွောတာတှေ၊ကစားတာတှေ၊လှညြ့စားဖို့တှေ သူတို့မှာဘာမှအာရုံမရှိရှာပါဘူး။တစနြတေ့စနြဘေ့ာစားရရငကြောငြးမလဲနဲ့ ဘယဆြိုငကြောငြးလဲ..ဘယဆြိုငတြော့ 2+1 discount တှခနွေပှေီဘာညာဆိုတာတှေ မလှတသြှားအောငလြိုကစြုံစမြးထောကလြှမြးနရတောနဲ့တငအြားလပခြွိနမြရှိရှာသူလေးတှပေါ။
ဟုတတြယလြေ။သငြ့ကောငမြလေးက အစားတစလြိုငြးလေးဆိုရငြ သငနြဲ့အစားနဲ့ဘယသြူ့ကိုပိုခစွလြဲလို့မေးကှညြ့ “ဟာ… ကိုကိုကလဲ…တူမှမတူတာကှာ..”ဆိုပှီိးခွှဲပါလိမြ့မယြ။တကယလြို့ သငြ့ကိုပိုခစွတြာပေါ့ဆိုရငလြညြးသူညာနတောပါ။ ဒါပမယြေ့ သူတို့မုနြ့စားမယြ့အခွိနတြှထေဲကနဖေဲ့ပှီးသငနြဲ့နပေေးတာဖှစတြဲ့အတှကြ သူတို့ရဲ့သငြ့အပေါခြစွတြဲ့အခစွကြစစမြှနတြယဆြိုတာပှနတောပါပဲ။
သငဖြုနြးခေါတြာမကိုငလြို့၊message တှပှနေမြပို့လို့ဆိုပှီး ဘယကြောငနြဲ့လွှောကလြညနြပှေီလဲလို့စိတပြူနစရောမလိုမယြ့သူမွိုးတှပေါ။ သငဖြုနြးခေါတြာမကိုငခြဲ့ရငြ သူတို့တစခြုခုစားနလေို့ ၊အစားမှာစိတရြောကနြလေို့ပါပဲ။သူတို့စိတထြဲမှာ သငရြယအြစားအသောကတြှရယေကြလှဲပှီး ဘယသြူ့အတှကမြှနရောပေးမထားတဲ့အတှကြ သငြ့အနနေဲ့ ဘယတြော့ဖောကပြှနမြလဲရယဆြိုပှီး တှေးပူနစရောမရှိပါဘူး။
သူတို့ကအစားအသောကကြိုအသညြးစှဲလေ။ ဒီတော့ စိတကြောကရြငသြူတို့ကှိုကတြာလေးတှဝယေပြှီးခွော့လိုကရြုံပဲပေါ့။ဝကကြှေးအိုးနံ့မှေးမှေးလေးရရငြ၊ဒါမှမဟုတဆြူရှီနံ့သငြးသငြးလေးရရငအြလိုလိုကို စိတကြောကပြှပှေီးသားဖှစနြမယြေ့ကောငမြလေးတှပေါ။ သငလြုပထြားတဲ့အပှစကြကှီးတယဆြိုရငတြော့ ဟော့ပေါ့ဘယနြှစခြါစားခှငြ့ကတတြို့ဘာတို့လုို Gift card လေးတှဝယေပြေးဖို့လိုတာပေါ့လေ 😛
အစားကောငြးကှိုကတြဲ့ကောငမြလေးတှကေ သူတို့ကှိုကတြာတောတြောမြွားမွားကိုကိုယြ့ဘာသာလုပစြားဖို့လညြးကှိုးစားလရှေိ့ကှပါတယြ။ဒီတော့ သူတို့ကိုယူလိုကတြဲ့ကောငလြေးတှကသေူတို့စားသလိုကောငြးကောငြးစားရပှီပေါ့။ ဒါတငပြဲလားဆိုတော့မဟုတသြေး… သူတို့က ဘယဟြာနဲ့ဘယဟြာနဲ့တှဲစားရငစြားလို့ကောငြးတယဆြိုတာမွိုးလညြးနှံ့နှံ့စပစြပသြိသေးတာမို့ သငရြဲ့တစဝြမြးတစခြါးစိုပှစဖေေို့တော့ စိတမြပူလနေဲ့တော့။
အစားကောငြးအသောကကြောငြးကှိုကသြူလေးတှကေ သူတို့ကှိုကတြာတှဟောမွားသောအားဖှငြ့ စွေးကှီိးတာကှောငြ့ ကိုယကြှိုကတြာကိုယဘြယသြူ့မကွနြှာမှကှညြ့မနပေဲဝယစြားလို့ရအောငြ ပိုကဆြံမွားမွားရှာနိုငအြောငကြှိုးစားတတကြှသူလေးတှလညြေးဖှစပြါတယြ။ ဘဝမှာ ဘယသြူ့မှအားကိုးမနဘေူး ယောကြွားတှဘောတှလညြေးမလိုဘူး၊ကိုယြ့ပိုကဆြံနဲ့ကိုယြ ကိုယကြှိုကတြာအေးဆေးသာသာယာယာစားမယလြို့ ကှေးကှောနြတတေသြူလေးတှပေေါ့။ဒါကှောငြ့ သူနဲ့ကှိုကရြငတြော့ သူစားတာနဲ့ပဲမှဲမှာပဲလို့မတှေးပါနဲ့ ။တစခြါတစလြကေိုယြ့ခစွသြူကှိုကတြာဝယကြွှေးရတာမွိုးတော့ရှိမှာပေါ့လေ။ မွားသောအားဖှငြ့တော့သူတို့စားခငွတြာစားရဖို့ သငြ့ကိုအားကိုးတကှီးတောငြးဆုိုနမယြေ့သူတှမဟေုတကြှပါဘူး။ (online shops တှေ၊အစားအစာပို့စတြှတေိုငြးရဲ့အောကမြှာ သူတို့ဘဲမှနြးသိအောငြ ဘဲကိုမနြးရှငြးပှီး ဆပပြှာတုံးကိုတရောသြုတထြားတဲ့အရေးအသားနဲ့ “ကိုကိုးးးးးး ခစွတြုံးလေးကိုဝယကြွှေးနြော၊ဝယပြေးနြော”လို့ မနြ့တတတြဲ့ Pleb မွားမပါ)
ဒါတှကတေော့ အစားတစလြိုငြးကောငမြလေးတှကေိုဘာကှောငြ့ခစွသြငြ့တာလဲဆိုတဲ့အခကွလြေးတှပေဲဖှစပြါတယြ။ သငြ့ခစွသြူကအစားတစလြိုငြးလေးဆိုရငတြော့ ဂုဏယြူလိုကပြါတော့။ ရညြးစားမရှိတဲ့အစားတစလြိုငြးလေးတှဟောဆိုရငတြော့ ရှာဖှတှရှေိ့ခှငြးမခံရသေးတဲ့ ကွောကမြကွရြတနာလေးတှပေါ။ဒါကှောငြ့ကိုယြ့လိုကွောကမြကွရြတနာလေးတှရှေိရငြ Mention ပှီး ဂုဏဆြာလိုကကြှရအောငြ…အဲ့လယြ။
အလှနခြွောသော အစားတစလြိုငြး Admin မမ
Posted in Food, Lifestyle, Relationships